एमाले प्रवेश गर्छु भन्दै बालकोट पुगेका गगनलाई केपी ओलीले किन रित्तो हात फर्काए ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले प्रवेश गर्छु भन्दै बालकोट पुगेका गगनलाई केपी ओलीले किन रित्तो हात फर्काए ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो निवासमा आफ्ना मतदाता समक्ष डरलाग्दो अहंकार प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले प्रवेश गर्छु भन्दै आफ्नो निवासमा आएका गगन पुरी लगायतलाई ओलीले भेट्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
गगन पुरी र अन्य दुईजना ओलीलाई भेट्न मंगलबार साँझ दमक पुगेका थिए । ओलीसँग भेट्ने प्रवन्ध दमककै एक एमाले कार्यकर्ताले मिलाइदिएका थिए । भेटको समय मिलेपछि पुरी र अन्य दुईजना ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । भेट्न गएका अन्य एकजना मोरङ उर्लाबारीका पुराना कम्युनिष्ट कार्यकर्ता भएको बताइएको छ ।
बालकोटमा पहिले त गगन पुरीलाई ओली निवासको कम्पाउण्ड भित्र पस्नै दिइएन । सुरक्षाकर्मीले ‘भित्रबाट तपाईंको नाम आउनुपर्छ अनि मात्र भित्र जान पाइन्छ’ भनेका थिए । करिब एक घन्टा गगन पुरीको टोली गेट बाहिरै उभिएर बसेका थिए । त्यसपछि झापाकै एक एमाले नेता त्यहाँ आइपुगे । उनले गगन पुरीहरु केपी ओलीको क्षेत्रका मतदाता भएको बताउँदै अनुरोध गरिदिए पनि भित्र पस्न पाएका थिए ।
केपी ओलीले आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई पुरै बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । ओलीको अहंकार गगन पुरीको टोलीले प्रत्यक्ष भोग्न पायो । आँगनमा ओली निवासका एक अर्दलीले भेट्ने के काम छ भनेर गगन पुरीलाई सोधेको थियो ।
गगनले ‘केपी कमरेडलाई नै भन्छु’ भनेका थिए । तर उनले आफूलाई भन्नैपर्ने नत्र भेट्न नपाइने भनेपछि गगनले एमाले प्रवेशको वातावरण मिलाउन तथा दमकको विकास निर्माण सम्बन्धमा कुरा गर्न आएको हुँ भनेका थिए ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति ओलीको उपेक्षा देख्नेहरुका अनुसार आउँदो चुनाव ओलीले प्रत्यक्षमा नलडेर समानुपातिकबाट लड्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । दमकमा अहिले नेपाली कांग्रेस अत्यन्त बलियो अवस्थामा छ । गगन पुरी अब कांग्रेस प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेर गएको बताइन थालेको छ ।